Public Health in Myanmar: Soft Drinks for Caution !!!
သိပ်ကောင်းတဲ့ပို့စ်လေးပါ Dr Nyan။ လူအတော်များများက Soft drink တွေကို သောက်စရာအမျိုးအစားကောင်း အဖြစ်ပဲ ထင်နေကြတာအမှန်ပဲ။ အမှန်က Soft Drinks တွေ၊ ချော့ကလက်၊ အိုက်စရင်၊ ဘီစကစ်နှင့် သွားရေစာ မုန့်အချိုစာတွေ အားလုံးက သွေးထဲသကြားဓါတ်ကို လိုအပ်တာထက် ပိုပြီးစုပြုံစေတဲ့အတွက် အန္ဓရယ် ရှိပါတယ်။ ဒီအစာတွေက မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အာဟာရထဲမှာ မပါပါပဲ အပိုစားသုံးစရာတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဟာရလိုရင် အရည်သောက်မည့်အစား စားစရာကိုပဲ စားသင့်ပါတယ်။ ဆော်ဒါနဲ့ သကြားလုံးဝ မရောထားတဲ့ ၁၀၀% သစ်သီးရည်နှင့် သစ်သီးဆိုရင်တောင် အရည်သောက်မည့်အစား အသီးကိုစားနိုင်ရင် အမျှင်ဓါတ်ပိုရလို့ ပိုကောင်းပါတယ်။ တကယ်တော့ သောက်စရာမှန်သမျှထဲမှာ ရေထက်ကောင်းတဲ့သောက်စရာ ဘာမှမရှိပါဘူး။
အချိုရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခုမှပဲ သေ၂ချာသိတော့တယ်ရှင်
This topic very good. And now, i know well about soft drink. Further more, drink with straw to avoid such kind of danger. Whatever not only this topic but also this blog are excellent.
မင်္ဂလာပါ ဒေါက်တာ(Dr Nyan)
ကျွန်မကို ကျွန်မ လေးစားစွာနဲ့ ပထမဦးဆုံးမိတ်ပါရစေ။ ကျွန်မနာမယ်ကတော့ နှင်းဆွတ်မိုးပါ။ ကျွန်မအနေနဲ့ “ရဲရင့်”လို့အမည်ရတဲ့ ဂျာနယ်တစ်စောင်ကို ရှေ့လာမဲ့ ဇန်န၀ါရီလ (၁)ရက်နေ့မှာ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ထုတ်ဝေဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ ဆရာ့တို့ရဲ့ဘလောက်ကို မကြာခဏအလည်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးတစ်နေ့တစ်ခါတော့ ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ့တို့ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ လုံ့လကိုတော့ ကျွန်မလေးစားပါတယ်။
ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့သွားနဲ့ခံတွင်းဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေကို ပြန်ဝေမျှလို့ရပါတယ်။ အဲဒီအတွက်စာမူခမလိုအပ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ပြည်သူအများထဲသွားနဲ့ခံတွင်းဗဟုသုတတွေတိုးပွားစေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မို့ အခုလိုထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေပေးမှာကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဒီဆိုဒ်မှာစာရေးသူအနေနဲ့ပို့စ်တွေထပ်တင်ဖို့မရှိတော့ပေမယ့်၊ အရင်တင်ထားတာတွေရယ်၊ ကျွန်တော့်မြင်းမိုရ်ဦးဆိုဒ်ရယ်မှာရှိတာတွေ လိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တခုဘဲမေတ္တာရပ်ခံလိုတာက ကျွန်တော်ဟာရဲရင့်ဂျာနယ်ရဲ့စာရေးသူတစ်ယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်၊ ဘလော့ဂ်လင့်ခ်မှတဆင့်မျှဝေပါသည်..ဆိုတာလေးမှတ်ချက်ဖြစ်ဖြစ်ရေးပေးရင်ရပါပြီခင်ဗျာ။